That's so good, right?: Dropping the Soap : Part 2
*** Read the first part of story here.
၀ယ်ခြမ်းစရာရှိတာလေးတွေဝယ် မျက်စိအစာကျွေးစရာရှိတာကျွေးပြီး အိမ်ကို ကျွန်တော်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် တစ်ယောက် ယောက်နဲ့ လမ်းပေါ်ဆုံမှာကို မစိုးရိမ်မိခဲ့ပါဘူး။ အင်း…..အထက်တန်းကျောင်းပြီးကာလနဲ့ ကောလိပ်မဖွင့်ခင်ကြား နွေရာသီဖြစ်နေ ခဲ့တော့ ကျောင်းတက်စရာမလိုတဲ့အချိန်ပေါ့ အခုဟာက။ အဖေနဲ့အမေတို့က မြို့စွန်ရပ်ကွက်ထဲမှာ အေးအေးဆေးဆေးနေနေကြပြီး ကျွန်တော် ကတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်မြို့လယ်နား တိုက်ခန်းမှာနေပါတယ်။ အမေတို့ ခေါင်းခဲစရာ ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘီလ် တွေမပေးရ သေးတော့ အေးအေးသက်သာ ဟိုလှိမ့်ဒီလှိမ့်ပေါ့။ တစ်ပတ်လုံးလိုလို တိုက်ခန်းမှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းနေဖြစ် တာကြောင့် အချိန် အလကားဖြစ်မယ့်အတူတူ သင်တန်းလေးတစ်ခုခုတက်ဖို့လိုမယ်လို့တွေးမိခဲ့ရော။ အထူးသဖြင့် ကိုချမ်းနဲ့ အမြဲတစေတွေ့မြင်ကာ အချိန်ကုန်စေမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးက အခရာပေါ့နော်။ ရေချိုးခန်းထဲမှာ သူ့ကိုလက်ကစားပေး အာသာဖြေ ပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း မှာတော့ ကျွန်တော့်အတွေးထဲမှာ အဲ့ဒီကိစ္စကိုပဲ တ၀ဲလယ်လယ်ဖြစ်နေမိတယ်။ သူ့ဟာကြီးကိုလက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ရ တာက တဆုံးဆိုတော့ လိင်ဆက်ဆံဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် ပြဿနာမဖြစ်လောက်ပါဘူး….ဟူး။
ကျွန်တော့်အခန်းလည်းရောက်ရော လျှို့ဝှက်အံဆွဲလို့ခေါ်နိုင်မယ့် ဘယ်သူမှမသိတဲ့ အံဆွဲရှိတဲ့အ၀တ်ဘီဒိုဆီခပ်သွက်သွက်သွားလိုက် တယ် ကိုယ်ပိုင် dildo တွေသိမ်းထားတဲ့နေရာလေ။ ပန်းသွေးရောင်ဖျော့ဖျော့ မမာ့တမာပစ္စည်းကိုလက်ထဲကိုင်ထားပြီးစိတ်ထဲကနေ ကိုချမ်းရဲ့ငပဲဆိုဒ်နဲ့တိုင်းထွာကြည့်မိတော့ dildo ထက် ရောင်ရောင်လေးတိုပြီး အတုတ်ကတော့ ကိုချမ်းဟာကပိုသာတယ်။ ခဏနေက ၀ယ်ခဲ့သော လျှို့ဝှက်အိပ်ကလေးကိုဖွင့်အတွင်းက ကျွန်တော့်ကစားစရာအသစ်ကိုထုတ်လိုက်ပါတယ် butt plug တစ်ခု။ ဒါကြီးနဲ့မကြာ ခဏလေ့ကျင့်ပေးမှ ကိုချမ်းနဲ့တကယ်ဆက်ဆံတဲ့အခါ အဆင်ပြေမှာဗျ။ အို….အ၀တ်တွေကိုအကုန်ချွတ် Lube ပုလင်းရယ် ပစ္စည်းသစ် ရယ်ယူကာ ရေချိုးခန်းထဲ တန်းဝင်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော် ခံသာလောက်မယ့်အပူချိန်ရှိအောင် ရေပူခလုပ်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီး ကြွက်သားတွေ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်အောင် အရင်ဖြေလျော့ ပြီးတော့ lube နည်းနည်းကို butt plug ပေါ်ညှစ်ချလိုက်ကာ ထိပ်ပိုင်းလေးကို ခရေ၀ ထဲ တို့ထိဖိသွင်းကြည့်မိတယ်။
ကျွန်တော် ထိပ်ပိုင်းလေးကိုနည်းနည်း နည်းနည်းဆိုပြီးဖိသွင်းလိုက်ကာ ခဏငြိမ်လိုက်ရင်း အခြေလေးကိုအသာထိန်းကိုင် အတွင်းထဲ ဘယ်လောက်ရောက်ပြီလဲ မှန်းစကြည့်တာ တစ်ဝက်လောက်ပဲဝင်သေးတယ်။ ကျွန်တော် ငပဲကိုအသာဆုပ်ကိုင်ကစားလိုက်တယ် မသိမသာပေါ့။ ပြီးတော့ တစ်ချက် တစ်ချက် တင်တွေကိုဖိဖိချလိုက်တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ခရေ၀ထဲ အပြည့်အကြပ်ဖြစ်သွားကာ နှုတ်ခမ်းသားတွေက ပြန်လည်ရစ်သိုင်းသွားတဲ့အနေအထား။ ဘယ်လို ဖီလင်လည်းမသိဘူးဗျာ ပြန်မပြောပြတတ်တဲ့ ခံစားမှုမျိုးနဲ့အတူ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ ငိုက်နေရာကနေ ဘက်ပြန်ကန်သလို ဖန်းကနဲမတ်လာတယ်။ ကျွန်တော် ဒီလိုနည်းနဲ့ ဖီလင်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့မလုပ်ဘူး လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ကိုချမ်းက ပြန်ကူညီနိုင်မယ့်အချိန်ထိသိမ်းထားဖို့လိုမယ်လေ။ ကျွန်တော် ခရေ၀ထဲထည့်ထားတာကိုအသာပြန် ထုတ် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး ရေချိုးလိုက်ပါတယ်။ ၀တ်ထားတဲ့ jock strap တစ်ထည်ကိုချွတ်ရင်း အိပ်ရာပေါ်ခဏလှဲလျောင်းလိုက်မိရဲ့။ ပြီးမှ thong တစ်ထည်ကောက်စွပ်လိုက်ကာ ကစားစရာအသစ်လေးကို အံဆွဲထဲသွားထည့်လိုက်ရော။ အိပ်ရာအစွန်းနားမှာလဲလျောင်း နေတဲ့ Laptop ကိုလှမ်းယူဖွင့်ပြီး online ပေါ်ကကြည့်နေကြ ဆိုက်ကနေ blow job ဘယ်လိုကောင်းကောင်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့ ဗီဒီယို ကလစ်လေးကိုရှာကြည့် ဖွင့်ကြည့်မိတယ်ပေါ့။
ကျွန်တော် နောက်တစ်နေ့မနက် ၁၀နာရီလောက်မှ အိပ်ရာကထဖြစ်တယ်။ ဖုန်းကိုကောက်ကိုင်လိုက်တော့ miss call တစ်ခုတွေ့ရဲ့။ အိုး…ကိုချမ်းခေါ်ထားတာပဲ။ သူ့ကိုနောက်တစ်ကြိမ် လိင်ကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်လို့မပြောမိအောင် စကားမပြောဖို့ရှောင်ထားဦးမယ်စိတ်ကူး နေတာပါ။ အခု မက်ဆေ့စ်တစ်စောင်မှမတွေ့တော့ သူ့ကို ကျွန်တော်ဖုန်းပြန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်လိုက်တာကြောင့် သူ အတော်ပျော်သွားပုံပေါ်တယ်။ စကားတွေဟိုပြောသည်ပြောနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ကစားပွဲတစ်ခုကို အဆုံးမသတ်ဘဲ ကျွန်တော်အမြန် ပြေးထွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဆီ ဦးတည်သွားရော။ အဲ့တာလည်းပြောပြီးရော သူက ကျွန်တော်သာအချိန်ရရင် နှစ်ယောက်သားဆက်လုပ်လို့ရ တာပဲတဲ့။ ဒီတော့လည်း အမိုက်စားပေါ့ လုပ်ကြမယ်လို့ပြောလိုက်မိတယ် စိတ်ထဲမှာတော့ ကစားပွဲတစ်ခုတော့ စပြန်ပြီလို့ပြောမိရင်း မခိုးမခန့်ပြုံးမိလေသတတ်။
အာ…ကျွန်တော်ဝတ်နေကျ under wear ကိုမ၀တ်မိဘဲ မနေ့ညက၀တ်ထားလက်စ jock strap ကိုဝတ်ထားမိတာ အပြင်ထွက်ကာနီးမှ သတိရတယ်။ ဒါလည်းတစ်မျိုးကောင်းတာပဲ I’m ready ပေါ့ဘောင်းဘီချွတ်လိုက်တာနဲ့။ ကျောပိုးအိတ်တစ်ခုထဲ တဘက်တစ်ထည်ပစ် ထည့်၊ ကျွန်တော်ဝတ်နေကျ speedo ကိုဆွဲထည့်ကာ ရေကူးကန်ဘက်အပြေးလှမ်းမိတယ်။ ရေကူးဖြစ်မဖြစ် မသိသလို ဘာလုပ်ဖြစ်မယ် မသိပေမဲ့ ၀တ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီ ညာဘက်အိပ်ထဲမှာတော့ Lube ဘူးက ခိုးလုခုလုနဲ့ပါလာရော။ Butt Plug နဲ့ခရေ၀ကိုချဲ့ထားတာဆို တော့ အဆင်ပြေလောက်ပါရဲ့ ကိုချမ်း ပစ္စည်းကြီးနဲ့လေ။
ကျွန်တော်လည်းရောက်သွားရော နည်းနည်းတော့ စိတ်ပျက်သွားမိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အမှတ်မထင် ရေချိုးခန်းထဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုချမ်းက အလေးအနက်ထားနေသလို ဒီထက်ပိုတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာဖို့လည်း အာသီသ ရှိနေသလိုကြောင့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေ နာရီအနည်းငယ်လောက်တော့ ရေကူးဖြစ်ကြပါတယ်။ အ၀တ်တွေလဲကြတော့ ဘာတွေများ သူဇာတ်လမ်းထွင်မလည်း စောင့်ကြည့်မိပြန်လည်း ခပ်သွက်သွက်အ၀တ်လဲလှယ်နေတဲ့ ကိုချမ်းကြောင့် ဒီနေ့တော့အလုပ်မဖြစ်ဘူးဆို တာ ကျွန်တော်သိခဲ့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုအဆင့်ကိုတက်လှမ်းမလဲ စဉ်းစားမိကာရှိသေး သူက ဘီရိုဘက်လှည့်ကာ အ၀တ်တွေထည့်ထား တဲ့အိတ်ကိုလှမ်းယူနေပြီဖြစ်တာကြောင့် စကားစမြည်ပြောရုံကလွဲလို့ဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ ကိုယ့်ဖာသာပြောမိရော။ ဒီကိုအလာတုန်းက တော့လေ ကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခေါက်က လုပ်ခဲ့သလို ရင်ခုန်မှုလေးတွေဝေမျှမယ်ပေါ့ အခု ကိုယ့်ရှူးဖိနပ်ကိုကိုယ်စီးနေရတဲ့အခြေဖြစ် နေပြီ။ သူက ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြား ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေအတွက် တောင်းပန်စကားဆိုလာတော့ ဒါဟာ အ၀တ်တွေချွတ်ဖို့ မလိုဘူးဆိုတာပြနေတာကြောင့် ကျွန်တော့်မှာ စိတ်မသက်မသာခံစားရပါတယ်။ သူ ကျွန်တော့်စိတ်ကို တစ်မျိုးတစ်မည်ရှုပ်စေအောင် လုပ်ခဲ့တာပဲဗျ။ ကျွန်တော် မတ်တပ်ရပ်လိုက်ကာ ‘ငါတော့ ရေချိုးလိုက်ဦးမယ်ကွာ အပြန်ဝင်စရာရှိလို့ အိမ်ကျမှမချိုးချင်တော့ဘူး’လို့ ပြောလိုက်ကာ ရေချိုးခန်းဘက်ကို ဦးတည်သွားလိုက်တယ်။
သူ့နံဘေးကနေ ခပ်ဖြေးဖြေးလျှောက်သွားလိုက်ပြီး ရေချိုးခန်းနားအရောက် သူ့ဘက်ကိုမသိမသာစောင်းငဲ့ပြီး သူကောလိုက်မလား မေးဟန်ပြုသည့်အကြည့်တစ်ချက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လူအများစုချိုးတဲ့နေရာမဟုတ်တဲ့ အ၀တ်လဲခန်းထဲက ရေချိုးခန်းဖြစ်တာကြောင့် ဘာကိုမှ ဂရုမပြုဘဲ ကိုယ်ပေါ်ကအ၀တ်တွေကို တစ်စမကျန်ချွတ်ပစ်လိုက်တယ်လေ။ ကိုချမ်းကတော့ သူ့ဝတ်စုံကိုကိုင်လျက်ငေးကြည့် နေတာကိုတွေ့ရပါရဲ့။ ဒီလိုလုပ်လိုက်ရပြန်တော့ စိတ်ထဲတင်းကြပ်နေတာတွေလျော့သွားသယောင်ခံစားရပါတယ်။ ရေချိုးခန်းထဲထိ လိုက်မလာဘဲ အ၀င်ဝနားရပ်နေတဲ့သူ့ကို ဆွဲခေါ်လိုက်ရင်း ကိုယ်ပေါ်ကအ၀တ်တွေကို ဆွဲချွတ်ပေးလိုက်ပါတယ် တစ်ကိုယ်လုံးအ၀တ် မရှိအောင်ပေါ့။
မလုပ်ပါနဲ့လို့လည်းမတား ကျွန်တော်သွားရာ ရေပန်းခေါင်းဘက်ကိုလည်းမလိုက်လာခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်မှာ သူ့ကိုယ်ပေါ်ကလက်ကျန် အ၀တ်တွေကို သူချွတ်နေတာကို လည်ပြန်ငဲ့ကြည့်ရင်း ပေါင်ကြားက ညီဘွားက အလိုက်မသိ ခေါင်းထောင်ထလာပါတော့တယ်။ နောက်တော့ ကျွန်တော်နဲ့အတူရေလာချိုးပါရော။ သူ့စိတ်ကိုသူထိန်းချုပ်နိုင်တာ အတော်ချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်ဗျ သူ့ပေါင်ကြားက ငနဲကိုထိန်းနိုင်တာက ပိုသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်။ သူလမ်းလျှောက်လာရာမှာ ပေါင်ကြားကငပဲဟာ ထောင်မတ်ခြင်းမရှိပျော့ပြောင်း လျက်ပင်။ ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းပြီးတစ်လှမ်းနီးလာတိုင်း သူ့လမ်းလျှောက်ဟန်က ကျွန်တော့်ရင်ခုန်သံကိုပိုမိုပြင်းထန်စေသလိုပါပဲ။ ခပ်တင်းတင်းဖြစ်နေတဲ့ သူ့လိင်တံထိပ်အရေပြားက အထုပ်မဖြေရသေးတဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင်ထုပ်တစ်ထုပ်လိုရင်ခုန်စေပါတယ်။
သူဝင်လာတော့ ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းရေချိုးခန်းလေးဟာ ပိုမိုသေးငယ်သွားသလိုစိတ်ထဲခံစားရပါတယ်။ ကျွန်တော့်နောက်တော်ပါးကနေ တဖြေးဖြေးတိုးကပ်ဝင်ရောက်လာတာများ ရင်ခုန်သံတွေကို ပိုမိုကျယ်လောင်လာစေရော။ အိုး….မနေ့ညကရော မနက်ခင်းကရော Butt plug နဲ့တွင်းချဲ့ထားတဲ့နေရာမှာ သူ့ငပဲကြီးအစားထိုးထည့်ဖို့ အပြင်းအထန်ကိုလိုအပ်လာပါတယ်။ ကျွန်တော့်နောက်မှာသူရပ်လျက် အနေအထားမှာပဲ သူ့ကို မနေ့ညကကိစ္စအပေါ်ဘယ်လိုခံစားရလဲမေးလိုက်တယ်ဗျ။ ကိုချမ်းအပြောအရ သူငယ်စဉ်အချိန်တုန်းက အခြားငယ်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့ အလားတူကိစ္စမျိုးလုပ်ခဲ့ဖူးသတဲ့။ သူတို့အနေနဲ့လိင်ကိစ္စကိုထဲထဲဝင်ဝင်မသိကြပေမဲ့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် -ွင်းထုပေးဖြစ်ခဲ့ကြတာမှာ မနေ့ညကအဖြစ်အပျက်က အဲ့ဒါကိုအမှတ်ရသွားစေတယ်ဆိုပဲ။ ဒီနည်းလမ်းအရ သာယာမှုရှာတာက မဆိုးပါဘူးလို့လည်းပြောတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ အဖြစ်မှန်ကိုပြောပြဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်တုန်းကမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ မပြုလုပ်မဆက်ဆံခဲ့ဖူးသလို အခြားသူတစ်ဦး တစ်ယောက်ကို သာယာမှုပေးဖို့ဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်ကိစ္စဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအပါအ၀င်ပေါ့နော်။ စကားတွေဟိုပြောဒီပြော ဟိုကိုင် ဒီကိုင်တွေလုပ်ပြီး သကာလ အချိန်တွေဖြတ်သန်းလာလိုက်တာ မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ကျွန်တော်တို့မရခင် အထိ ပါပဲ။ သူငယ်ချင်းတွေ ပါတီလုပ်တိုင်း သူ မသိမသာ ကျွန်တော့်ကို ဖက်လားဖက်ရဲ့ နောက်ကနေ တင်းနေတဲ့သူ့ငပဲနဲ့ ကျွန်တော့်တင်ပါး တွေကို ဘောင်းဘီအပေါ်ကနေဖိကပ်လားဖိကပ်ရဲ့လုပ်လာတာ အမြတ်။
ကျွန်တော်သူ့ဘက်ကိုမျက်နှာမူလိုက်တော့ မာတောင့်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲက မမာ့တမာသူ့ငပဲကို သွားထောက်တယ်။ အစပိုင်းတော့ သူ ဘာလုပ်ရမယ် မသိ နောက်တော့ ဆွဲကိုင်ပြီး အသာအယာပွတ်သပ်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ် အစပိုင်းကတော့ ဒီလိုအသာအယာပွတ်သပ်ဆွဲ ပြုတာ ကလိသလို ဆွပေးသလို တစ်မျိုးကောင်းတယ်လို့ သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါရဲ့။ ကျွန်တော့်လည်း သူ့ငပဲကိုဆွဲကိုင်လိုက်ရင်း အထက်အောက် လက်ကစားပေးလိုက်တယ် ခပ်ဖြည်းဖြည်းပေါ့။ ကျွန်တော့်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို သူသဘောတူလာပြီထင်ပါတယ် ကျွန်တော့်ငပဲကို အသာအယာ လက်ကစားပေးစပြုလာရော။ ကျွန်တော် သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီလိုပြုလုပ်ကြဖို့ သဘောညီသလို ခွင့်လည်းပြုပေးလို့ပါ။ ကျွန်တော်သူ့ကို အသာအယာတစ်ချက်ပွေ့ဖက်လိုက်တော့ ကျွန်တော်တို့ငပဲတွေဟာ တစ်ယောက်ဗိုက်သားကို တစ်ယောက်ဟာက ထိုးထောက်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်သားကြား ခိုးလို့ခုလုပေါ့နော်။ သူ့လည်တိုင်လေးတွေကို လေလေးနဲ့အသာအယာ မှုတ်ပြုကြည်စယ်ကာ နားအ၀လေးကို လျှာနဲ့ ကလိရင်း သူ့ရှေ့မှာ ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်မျက်စိတွေနဲ့တစ်တန်းထဲ အနေအထားဖြစ်အောင် ထိုင်ချပြီးမှ သူ့မျက်နှာကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ကိုချမ်းတစ်ယောက် အံအား သင့်နေတဲ့ပုံပါ။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်တွေးမိပါတယ် သူ့ကိုဒီလိုလုပ်ပေးတာ ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူးလေလို့။ သူ့ငပဲကိုအရင်းကနေ အသာဆွဲကိုင်လိုက်ကာ ထိပ်ပိုင်းလေးကို ကျွန်တော့်ပါးစပ် အာခံတွင်းထဲသွင်းလိုက်ပါတယ်။
လိင်တံတစ်ချောင်းကို ကျွန်တော့်ပါးစပ်အတွင်းစတင်သွင်းလိုက်မိတဲ့ခဏမှာပဲ အဲ့ဒီခံစားချက်က ဘယ်လိုပြောရမလဲ သဘောကျတော့ မယ့် ကြိုက်တော့မယ့် အစားအစာတစ်ခုမှန်းသေချာတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်မိပါတယ်။ ကျွန်တော့်လျှာဖျားလေးကို သူ့ကွမ်းသီးခေါင်းနဲ့ ထိပ် အရေပြားအကြားထိုးသွင်းလိုက်ကာ ကွမ်းသီးခေါင်းတစ်ဝိုက်ရစ်နွယ်ပတ်ဝေ့ကစားလိုက်တယ်ပေါ့။ အနည်းငယ်ချိုသလိုလို ငန်သလိုလို အနံ့အသက်ကတော့ နံတာမဟုတ်တဲ့ သူ့ကိုယ်နံ့သီးသန့်လိုမျိုးရရှိမိရသလို သူ့နှုတ်ဖျားက ညည်းညူသံသဲ့သဲ့ထွက်လာတာကိုကြား ရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲဝယ် သူ့ငပဲတဖြည်းဖြည်းထွားလာတာကိုခံစားရမိသလို အရည်ကြည်လေးတွေစို့ထွက်စပြုလာတာကို လည်း သိနေမိသလိုပါ။ ကိုချမ်း သူ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကိုထိန်းကိုင်လိုက်ပြီးနောက် အသာအယာပဲ သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့် ပါးစပ်ထဲသို့ပိုမိုဝင်အောင် ဖိဖိသွင်းတယ်။ ကျွန်တော်သည်လည်း မေရိုးဆန့်နိုင်သမျှ ခပ်ကျယ်ကျယ်ဟကာ ကိုချမ်းငပဲ ၀င်နိုင် သမျှဝင်အောင်ပြုလုပ်ပေးမိတယ်လေ။ ထိပ်ပိုင်းလေးပဲ အသွင်းအထုတ်လုပ်ချိန်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်လက်တစ်ဖက်က သူ့ငပဲအောက် ခြေကို ကိုင်ကာ ကစားပေးမိတယ်။ တစ်ခါတလေ ငပဲထိပ်ပိုင်းလေးပဲ စုပ်ပြုနေချိန်ဆိုရင်တော့ သူ့ရွှေဥတွေကိုပါအသာအယာပွတ်သပ် ပေးသလို ငပဲထိပ်ဝလေးကိုလဲ လျှာနဲ့ကလိပေးလိုက်တယ်။ သူကြာကြာမထိန်းနိုင်တော့ဘူးဆိုတာ အဆမတန်ဖောင်းကြွလာတဲ့ငပဲ အရွယ်အစားရယ် ငပဲအောက်ပိုင်းက သွေးကြောလေးတွေ အလှုပ်အပြုဖြစ်လာတာတို့ကြောင့်သိရပါရော။ ကျွန်တော်လုပ်သမျှ သူ ဘာမှာစောကြောမလုပ်ဘဲ သာယာမိန်းမောနေတဲ့ ခဏမှာတော့ သူ့ငပဲကိုအတွင်းထဲထိရောက်သမျှရောက်အောင် ဖိအသွင်းခံလိုက်ရပြီး ပူနွေးသော သူ့သုက်ရည်တွေ ဟောကနဲဟောကနဲပန်းထည့်ခံလိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်မျိုချနိုင်သမျှမျိုချတာကိုပဲ နှုတ်ခမ်းထောင့်ကနေ လျှံကျလာတာကြောင့် မျှော်လင့်ထားတဲ့ပမာဏထက် သူ့သုက်ရည်တွေအတော်များမှန်းသိရပါတယ် ခင်ဗျ။
သူ့ငပဲခပ်ထွားထွားကို ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲက ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးချိန်မှာတော့ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို ရရှိလိုက်ရတာ အမှန်တရားပါ။ ကိုချမ်းရဲ့မျက်နှာကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် လိုအပ်နေခဲ့မှန်းမသိတဲ့ အရာတစ်ခုကို အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုအနေနဲ့ ရရှိပိုင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပုံဟန်မျိုး ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော် မတ်တပ် ထရပ်လိုက်ကာ သူ့ကိုအားရပါးရ တစ်ချက်ထွေးဖက်လိုက်ပါရဲ့။ သူ့ငပဲဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြေလျော့ကျသွားသလို ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်း ထောင့်က သုက်ရည်အချို့သည်လည်း မေးစေ့ဖျားသို့ခိုသီသွားပါတယ်။ ကိုချမ်းက တော်တော်ကောင်းတဲ့ဖီလင်ဖြစ်ကြောင်း ဘယ်တုန်း ကမှ သူ့ကိုဘယ်သူကမှ blow job ကောင်းကောင်း ဒီလိုမပေးခဲ့ဘူးကြောင်းပြောတယ်ဗျ။ ပြီးလည်းပြီးရော သူ ကျွန်တော့်မေးဖျားက သုက်ရည်စီးကြောင်းကို ညွှန်ပြလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ပူနွေးတဲ့သူ့လျာကိုအပြားလိုက်ထုတ်ကာ လျက်ပြုလိုက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်တော့် ကို အံ့အားတသင့်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ကိုချမ်းက ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းမှာစိုစွတ်နေတဲ့သူ့သုက်ရည်ရဲ့အရသာကို မြည်းစမ်းကြည့်ရတာ မဆိုးပါဘူးလို့ပြောပြီးနောက် သူ့မျက်နှာ မှာ အရိပ်အယောင်တစ်မျိုးပြောင်းနေတာကို သတိပြုမိပါတယ်။ အာ….ကျွန်တော့် နှလုံးခုန်သံတွေရပ်တော့မှာပဲ ကိုချမ်းလေ နှုတ်ခမ်းကို ခပ်ဖွဖွနမ်းတယ် ပြီးတော့ လည်တိုင်တလျောက်ကို နမ်းတယ် အင်း….ရှီး…..ကျွန်တော့်ရင်အုပ်တွေကို အနမ်းဆက်ပေးရာကနေ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီး ဗိုက်သားတွေကိုသူနမ်းပါတယ်။ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေ အနမ်းငယ်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ သူ့မျက်နှာကိုကြည့်ရတာ ကျွန်တော် အထင်သေးသွားမလား အခုသူလုပ်ဆောင်နေတာကိုဆက်လုပ်ရမလားဆိုတာတွေ လွန်ဆွဲနေပုံရပါရဲ့။ ရင်ခုန်သံတွေ မီးရထားတစ်စင်းလိုခုတ်မောင်းနေရပြီး သူကိုင်တွယ်လိုက်တဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲဟာလည်း အရှက်မရှိ သူ့မျက်နှာအနားဝယ် ဒုံးပျံတစ်စင်းလို မတ်ထောင်နေပါပြီလေ။ ကိုချမ်းအသာအယာပွတ်သက်ကစားပြီးနောက် ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့အာခံတွင်းထဲထည့်ငုံလိုက်သလို အားနေသောအခြားလက်တစ်ဖက်က သူ့ငပဲကိုကိုင်ကာ ကစားနေတယ်။ အဲ့လိုအနေအထားနဲ့ အချိန်အနည်းငယ်ငြိမ်နေပြီးနောက်မှာ ကျွန်တော့်ငပဲတစ်ချောင်းလုံးကိုသူ့အာခံတွင်းထဲရောက်နိုင်သမျှရောက်အောင် သူကြိုးစားတယ်ဗျ။ သူ့ဦးခေါင်းကိုတလှုပ်လှုပ်လည်း မကစား ဘာမှလည်းမလုပ် ပူနွေးနေတဲ့ အာခံတွင်းထဲငုံပြီးငြိမ်နေတာကြောင့် ကျွန်တော် လက်တစ်ဖက်ကိုသူ့ဦးခေါင်းမှာထိန်းကိုင်လိုက် ရင်း ငပဲကိုအထဲဖိဖိသွင်းပြပြီး ရှေ့ဆက်ဖို့ကြိုးစားရပါတယ်။ အဲ့ဒီအခိုက်အတန့် သူ ကျွန်တော့်ငပဲကိုအပြင်ပြန်ထုတ်လိုက်ကာ လက်နဲ့ပဲ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် ခပ်သွက်သွက်ကစားပါတယ်။
ကျွန်တော်က တင်ပဆုံကိုအနောက်ဖက်ကိုအနည်းငယ်ယို့လိုက်ကာ သူ့ပါးစပ်ထဲသွင်းရင်း ဇာတ်လမ်းဆက်ဖို့ကြိုးစားတယ် ပါးစပ်ထဲကို ခပ်သွက်သွက် အထုတ်အသွင်းလုပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်တကိုယ်လုံး သွေးတွေပူနွေးနေပြီး ခံစားချက်တွေက အထွဋ်အထိပ်ရောက်ကာ ပါးစပ်ကလည်း မထိမ်းနိုင်အော်ညည်းမိရင်း သုက်ရည်တွေကို အားရပါးရပန်းထုတ်မိပြီပေါ့နော်။ ကိုချမ်းလေ ကျွန်တော်သုက်ရည်တွေကို စပန်းကထဲက နောက်ကိုလည်းမယို့ ရွံရှာဟန်လည်းမပြ ဒီအတိုင်းငြိမ်နေတာကြောင့် သူ့မျက်နှာပြင်အနှံ့ ချွဲပြစ်သောအရည်တွေပေကျံ ကုန်ပါတယ်။ ကိုချမ်း မတ်တပ်ထရပ်ကာ သူ့ပါးကို ကျွန်တော့်ဘက်ထိုးပေးတာကြောင့် ကျွန်တော် တရှိုက်မက်မက် အနမ်းပေးလိုက် ပါရဲ့။
သူက ကျွန်တော့်အိမ်ပြန်ဖို့ ဘယ်လောက်ဝေးလဲတဲ့မေးပါတယ်။ ဖုံးကွယ်ထားသော အကာအကွယ်များကို ဖယ်ရှားပြီးစကာလမှာ လွတ်မြောက်မှုကို ခံစားရတဲ့ ဖီလင်မျိုးနဲ့ ကြည်ကြည်လင်လင်မျက်နှာပေးနဲ့ပါ။ သိပ်မဝေးပါဘူး ကိုချမ်း လိုက်အိပ်ချင်လို့လားလို့ မေးမိတော့ သူက ဘာမှတုန့်ပြန်မှုမပေး ကျနေတဲ့ဆပ်ပြာတုံးကို ကောက်ကာနံရံမှာကပ်ရိုက်ထားတဲ့ခွက်ထဲလှမ်းထည့်လိုက်တယ်။
အိုး….သေချာမတင်မိဘဲ အောက်ကို လျောကျသွားတယ်ဗျ။
Alex Aung (2 Sep 2015)